Moa ve ny marika manampy SEO?
Moa ve ny marika manampy SEO? Eny, tsy misy antony izy ireo. Eto ambany eto aho dia hanazava hoe ny meta tags (rehefa ampiasaina amin'ny tsara) dia afaka manatsara ny SEO ary mametraka fifamoivoizana lehibe kokoa amin'ny toerana avo kokoa ao amin'ny lisitry ny SERPs Google.
Alohan'ny zavatra hafa, andeha hojerentsika - inona no asan'ny tags amin'ny famaritana? Ireo meta Meta dia fohy kely ao anaty votoatin'ny lahatsoratra (raha tsy izany, snippets) izay ampiasaina hanomezana fanazavana hafa momba ny votoaty hafa ao amin'ny pejy. Tsy hita ao amin'ny pejin'ny tranonkala izy ireo, fa afaka jerena ao amin'ny pejin'ny pejy tsirairay (i. f. , izy ireo dia tsy misy afa-tsy amin'ny HTML, izay matetika amin'ny lohatenin'ny pejy web).
Variana meta isan-karazany efa fantatra avy amin'ny fiarahamonina bilaogy maoderina. Raha ny marina, ny famaritana votoaty fohy amin'ny meta dia manampy ny fikarohana "hamaky" ary "mahatakatra" ny votoatin'ny pejy rehetra amin'ny tanjon'ny fanoratana. Amin'ny ankapobeny, metadata (raha tsy izany, meta) dia ny fampahalalana momba ny angona rehetra ao amin'ny tranonkala. Noho izany, manampy ny SEO ve ny marika? Amin'ny fomba ahoana, mba ho ampy kokoa? Ny endri-tsoratra matanjaka indrindra amin'ny meta manan-danja mifototra amin'ny teny manan-danja indrindra dia aseho matetika rehefa mamaky azy ireo ny boka fitadiavana azy mba hamaritana azy - raha toa ka mifanaraka tsara amin'ny teny fototra sy ny metafom-pifandraisana meta.
Na izany aza, tokony hiaiky izany isika - tsy misy fiantraikany goavana amin'ny fikarohana. Na izany aza, ny metadata dia mbola nahazo lanja manokana ho an'ny milina fikarohana. Noho izany, manampy ny SEO ve ny marika? Eny, miasa tsara amin'ny meta midika hoe manome vatsim-pifanosana kely kokoa ho anao ny tranonkalanao mba ho laharana ambony ao amin'ny lisitry ny SERPs Google. Izany no mahatonga ireo meta meta dia mbola raisina ho toy ny ampahany manan-danja amin'ny mety ho tetik'ady SEO. Ankoatra izany, dia mety ho tena ilaina tokoa izany ho an'ny fanombohana fanombohana vao manomboka mijery ny tontolo midadasika amin'ny Search Engine Optimization.
Amin'ny ankapobeny, misy karazana meta maimaimpoana telo azonao ampiasaina amin'ny fanatsarana ny tranonkalanao SEO amin'ny alàlan'ny tenifototra malaza, meta famantaranandro, ary ny meta tag. Andao hojerentsika fohifohy ny azy ireo tsirairay avy:
Lohateny dia azo jerena ao amin'ny pejy lohateny izay hita mivantana eo amin'ny lisitry ny fikarohana. Mazava ho azy, indraindray ny lohatenin'ny lohateny indraindray dia tsy voatery ho fantatra amin'ny metadata. Na izany na tsy izany, ny toetoetran'ny meta dia manana ny toetoetrany hafa mitovy amin'ny mety ho mifandraika amin'ny ambangovangon'ny meta hafa.
Description meta tags dia fantatra amin'ny hoe "famintinana" ny tranonkala. Ny fampiasana meta an-tsoratra amin'ny mpanan-karena amin'ny teny lavalava sy ny teny fototra dia hanampy ny motera fikarohana hahatakatra hoe inona ny hatsaram-panahy sy ny habetsaky ny entana ho an'ny mpampiasa. Na izany aza, dia tsy tokony hanandrana ny hahazo ny famaritana meta miaraka amin'ny teny fanalahidy maro araka izay azo atao ianao. Mariho fa hahatonga azy ireo ho lava "ampahany" ho an'ny fitaovana fitadiavana azy ireo izany.
Metan'ny tenifototra Meta dia azo ampiasaina ho toy ny lahatsoratra dokambarotra organika mifandraika amin'ny SEO amin'ny fomba roa samihafa. Etsy ankilany, ny fisintonana ireo teny manan-danja indrindra ampiasainao amin'ny alàlan'ny tranonkalanao miaraka amin'ny toerana iray dia hanampy ny mpampiasa hahatakatra ny mety ho pejy ao amin'ny tranonkalanao. Amin'ny lafiny iray, raha manana alim-pandihizan'ny meta tenifototra ianao, dia afaka mandefa mpampiasa maromaro hikirakirana amin'ny tranokalanao mivantana avy amin'ny lisitry ny SERPs Google Source .